Musharaxiinta oo Shir 2aad uga furmay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaa kulanka furitaankiisa ka qeybgalay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor], oo mudooyinkii dambe howshii Maamulkiisa u dayacay danta Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxay Muqdisho markale martigelinaysaa Shir ay leeyihiin Musharixiinta Mucaaradka, ee sida aadka ah uga soo horjeeda qaabka uu Farmaajo u maamulayo doorashooyinka dalka.
Afhayeenka Musharixiinta Ridwaan Xirsi ayaa sheegay in wajiga 2aad ee Shirka looga hadlayo xaaladda dalka iyo doorashooyinka, iyadoo dib u eegis lagu sameynayo wixii ka hirgelay 18-kii qodob ee ku xsunaa War-murtiyeedkii ay kasoo saareen kulankii 6-da maalin uga socday Jazeera hotel.
Waxaa kulanka furitaankiisa ka qeybgalay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor], oo mudooyinkii dambe howshii Maamulkiisa u dayacay ka shaqeynta danta Farmaajo.
Kulanka wuxuu kusoo beegmayaa xili uu fashilmay jadwalkii doorashadda Farmaajo ee ahaa in 1-da December 2020 dalka doorashada Baarlamaaniga ka billaabato, lana doorto Senator-ka ugu horeeya.
Musharixiinta ayaa sheegay inay qaban doorasho kale hadii uusan Farmaajo fulin dalabkooda ku aadan sixida qaladaadka ka jira magacaabista gudiyadda, islamarkaana la sameynin gudiyo dhexdhexaad ah oo lagu aamini karo doorashadda dalka.
Dadka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Muqdisho uu dagaal ka dhici karo hadii labo doorasho lagu qabto, oo labo Madaxweyne kusoo baxaan, maadaama dhinacyada ay hubeysan yihiin.